~ ဏီလင်းညို ~: ကမ္ဘာတည်မယ့် ကဗျာ...
ရုတ်တရက် ရွာချလိုက်သောမိုးကြောင့် မြို့ထဲလမ်းမပေါ်မှလူတွေ ရုတ်ရုတ်သည်းသည်း ဖြစ်သွားကြရ၏။ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှ ဈေးသည်များမှာ အမိုးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သော ရောင်စုံထီးကြားကြီးများကို ဖွင့်သူဖွင့်၊ ရောင်းနေသောပစ္စည်းများအား ပလတ်စတစ်နှင့် အုပ်သူအုပ်ဖြင့် ကိုယ်စီအလုပ်ရှုပ်သွားကြ၏။
ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်နေသူများမှာလည်း ထီးအဆင်သင့်ပါသူတွေက ထီးကိုထုတ်ပြီး ဖွင့်ဆောင်း ရ၊ ထီးမပါသောသူတွေက နီးစပ်ရာနေရာများရှိ မိုးခိုနိုင်သော နေရာများသို့ အပြေးအလွှားသွားကြရဖြင့် ခဏတွင်းချင်းမှာပင် ရှုပ်ယှက်ခတ်သွားကြလေတော့သည်။
“ဟား...ဟား၊ ဟေ့ကောင် ၀ဏ္ဏ... ဟိုမှာကြည့်လိုက်စမ်း”
ရယ်သံတစ်ဝက်ဖြင့် သူ့အား လက်တို့ကာ ပြောလိုက်သော ထူးကျော်၏လေသံက အာလေးလျှာလေးသံ နည်းနည်းပေါက်နေခဲ့တာ အမှန်။ ထူးကျော်ညွှန်ပြရာဆီသို့ သူတို့ထိုင်နေခဲ့သော ဘီယာဆိုင်အတွင်းမှနေ အညို ရောင်မှန်ချပ်များကို ဖောက်ထွင်းကာ လှမ်းကြည့်လိုက်မိ၏။ မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းက တကယ့်ကို ရယ်ချင်စ ရာပင်။ ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်မှာ ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရပ်ရင်း ထီးကို အသည်းအသန်ဖွင့်နေရှာသည်။ သို့ သော် ထီးဖွင့်လိုက်တိုင်း လေက တိုက်လိုက်၊ သူ့ထီးက လန်ထွက်သွားလိုက်နှင့် အခါခါ ဖြစ်နေရသည့်အထဲ ချိုင်း ကြားမှ သူ့ပိုက်ဆံအိတ်ကြီးအား ပြုတ်ကျသွားမှာ စိုးရိမ်စွာဖြင့် ခဏခဏ ပြန်ညှပ်နေခဲ့ရသေးလေတာ။ ဒီကြားထဲ လူတွေက သူ့ကို တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့ဖြင့် တွန်းတိုက်သွားကြတော့ သူ့ခမြာ လူတွေကြားထဲ ယိုင်ထိုးယိုင်ထိုး ဖြစ်နေရ ရှာသေး၏။
“ဟော...ဟော..ကြည့်၊ သူ့ထီးက လန်သွားပြန်ပြီ။ ဟား...ဟား”
ဘေးနားမှ ပြည့်စုံကပါ ရယ်သံစွက်လျှက် ခပ်ကြိတ်ကြိတ်ပြော၏။ ပြည့်စုံ၏အသံမှာ ထူးကျော်နည်းတူ အာလေး လျှာလေးဖြစ်နေခဲ့တာ သူသတိထားမိလိုက်၏။ ထိုအခါမှ သူ့ကိုယ်သူ အထိတ်တလန့် ပြန်တွေးမိလာသည်။ သူစကားပြောလိုက်ရင်လည်း ဒီကောင်တွေလို အာလေးလျှာလေးသံ ပေါက်နေလိမ့်မလားမသိ။ အတွေးနှင့်အတူ စောစောက မြင်ကွင်းအပေါ် ရယ်ချင်စိတ်တို့ အားလျှော့သွားသည်။
မလုံမလဲဖြင့် သူ့ကိုယ်သူအနံ့ခံကြည့်မိတော့ သောက်ထားသော ဘီယာတန်ခိုးများကြောင့် ချဉ်စုတ်စုတ်အနံ့ကို ခပ်သဲ့သဲ့ရ၏။ သို့သော်လည်း ဒါဟာ မှန်အလုံပိတ်ထားတဲ့ အဲကွန်းအခန်းထဲမှာမို့နေမှာပါဟု ရီဝေစွာတွေးရင်း စားပွဲပေါ်မှ လက်ကျန်ဘီယာခွက်ကို သူမော့သောက်ပစ်လိုက်သည်။
ပြည့်စုံ၏အမေးကို ခပ်တည်တည်ဖြင့် ပြန်ဖြေရင်း ဆိုင်နံရံထက်မှ တိုင်ကပ်နာရီဆီ မသိမသာလှမ်းပြီး ခိုးကြည့်မိ ၏။ ညနေ ငါးနာရီ ထိုးခါနီးနေပြီ။ အိမ်ပြန်သင့်နေပြီဟု စိတ်ထဲတွေးမိသော်လည်း ဟန်ကိုယ့်ဖို့ဆိုသလို သူ ခပ်တည်တည် လုပ်နေမိတော့ ထူးကျော်က...
“ငါတော့ တော်ပြီကွာ။ ပြန်တော့မယ်။ ပြီးတော့ မိုးအေးအေးနဲ့ဆို ဘီယာသောက်ရတာ ဖီးလ်ကျဲတယ်။ ငါတို့ ဒီဆိုင်မှာ စ,သောက်တဲ့အချိန်တုန်းက မိုးမရွာလို့ ဘီယာကစ်လိုက်တာ”
“ဘာလဲ...၊ မင်းက ခု အပြင်းကစ်ချင်သေးလို့လား”
ပြည့်စုံ၏အသံက စိတ်ခေါ်သည့်အသံမျိုး။ ကြားထဲမှနေ အခြေအနေကို ငြိမ်ပြီး သူကြည့်နေလိုက်၏။ ထူးကျော်က မျက်နှာရှေ့တွင် လက်ဝါးတစ်ဖက်ကာပြကာ ခေါင်းကိုယမ်းရင်း ပြောသည်။
“ဟာ... ခု ဘယ်ကစ်လို့ဖြစ်တော့မလဲကွ၊ နှစ်ပင်လိမ်ပြီး ရွဲသွားမှာပေါ့။ ပြီးတော့ ခုပဲ အိမ်ပြန်ရတော့မယ့် ဟာကို။ ကျောင်းကပြန်လာတယ်လည်း ဆိုသေး၊ အရက်မူးပြီး ကွဲကွဲနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်သွားရင် ငါကွိုင်တက်လိမ့်မယ်”
ပြည့်စုံက သူ့ဘက်လှည့်ပြီး မေးလာ၏။ ထို့ကြောင့် လက်ပိုက်ထားသော အနေအထားမှနေပြီး ပခုံးကိုစုံတွန့်ပြ လိုက်သည်။ ပြောရမယ်ဆို ကြားနေ၀ါဒအား သူကျင့်သုံးလိုက်ခြင်းသာ။ တကယ်တော့ ထူးကျော်နည်းတူ သူလည်း အိမ်ပြန်ချင်နေမိ၏။ အပြင်းလည်း မသောက်ချင်တော့။ သို့သော် ပြည့်စုံအား ထူးကျော်ပြောလိုက်သလို မျိုးတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြီး သူမပြောချင်မိ။ တော်ကြာ သူ့အား အိမ်မပိုင်သူဟု ကျောင်းကဘော်ဒါတွေကြားမှာ ပြည့်စုံဆိုတဲ့ကောင် လျှောက်ဖွနေရင် မခက်ပါလား။
“မင်းလည်း မသောက်ပါနဲ့တော့ ၀ဏ္ဏရာ၊ ငါတို့ ပြန်ကြရအောင်။ ဒီနေ့တစ်နေ့လုံးလည်း ကျောင်းလစ်ပြီး ငါတို့ သွားချင်တဲ့နေရာတွေသွား၊ လုပ်ချင်တာတွေလည်း လုပ်ခဲ့ကြပြီးပြီပဲကွာ”
ထူးကျော်က အားမလိုအားမရဟန်ဖြင့် သူ့ကိုကြည့်ရင်း ခပ်ညည်းညည်း လေသံဖြင့် ပြောလာ၏။ ထူးကျော် စကားက ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါသည်။ ဒီနေ့ သူတို့သုံးယောက် လှိုင်သာယာဘက်မှ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဟု အမည်တွင်သည့် မိခင်ကျောင်းတော်ကြီးဆီသို့ မရောက်ဖြစ်ခဲ့ကြ။ ကျောင်းလစ်ပြီး သူ တို့သင်ရသော ဒုတိယနှစ် Civil သင်ခန်းစာများအစား မြေနီကုန်းဒဂုံစင်တာမှ ကားအသစ်တင်သော သရီးဒီရုပ် ရှင်ရုံတွင် အရင်ဆုံး ရုပ်ရှင်ဝင်ကြည့်ဖြစ်ကြ၏။ နောက် ကွန်ပျူတာဂိမ်းဆော့နိုင်သည့် အင်တာနက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်၊ ထိုမှတစ်ဆင့် နောက်ဆုံးပိတ် အခု မဟာဗန္ဓုလလမ်းပေါ်မှ ဘီယာဆိုင်သို့ ရောက်နေခဲ့လေတော့တာ။
သို့သော် သူကတော့ ထူးကျော်၏စကားအား ဘာသိဘာသာ ပုံစံမျိုးဖြင့် နေလိုက်မိသည်။ အေးရာအေးကြောင်း ပုံစံကို မသိမသာဖမ်းရင်း ပြည့်စုံထံမှ ဘာသံထွက်လာမလဲဟု ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် နားစွင့်နေမိ၏။
“ဒါဆိုလည်း လိမ့်ကြတာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမယ့် အပြင်မှာ မိုးသည်းနေတယ်”
ပြည့်စုံ၏အသံက ထူးကျော်၏စကားများအပေါ် တစ်ခုခုကို သဘောပေါက်သွားသည့် အသံမျိုး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မကြာခင်ပြန်ဖြစ်တော့မှာ သေချာသွားတာမို့ သူ့ရင်ထဲတွင် တိတ်တဆိတ် ၀မ်းသာသွားမိရ၏။ ထူးကျော်က အားတက်သရော လေသံဖြင့်...
“မိုးသည်းတာ ဘာဖြစ်သလဲကွာ။ ငါတို့ ဒီကထွက်ရင် တက္ကစီ ငှားစီးသွားကြမှာပဲဟာ။ ဟုတ်တယ်မို့လား ၀ဏ္ဏ”
ဒီတစ်ခါတော့ ထူးကျော်၏စကားအား သူခပ်သွက်သွက် ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်မိပါသည်။
သူတို့သုံးယောက် ကျသင့်ငွေအား အချိုးကျစီရှင်းပြီး ဘီယာဆိုင်ထဲမှနေထွက်ခဲ့တော့ အပြင်ဘက်တွင် မိုးက သည်းထန်လွန်းနေခဲ့ပါသည်။ သူနှင့် ပြည့်စုံတို့ထံတွင် ထီးမပါခဲ့။ ထို့ကြောင့် ထူးကျော်၏ ထီးကောက်ရှည်ကြီး အောက်တွင် သုံးယောက်သား ပူးပူးကပ်ကပ်ဆောင်းကာ ပလက်ဖောင်းပေါ် ပြိုင်တူခြေချမိကြသည်။ သူတို့ခြေ ထောက်များပေါ်သို့ မိုးရေစက်များက အလုအယက် လာရောက်ထိမှန်ကြလေတော့ ပြည့်စုံက စိတ်ပျက်သံနှင့်...
“ဘာဖြစ်လဲကွာ။ တက္ကစီပေါ်ရောက်မှ ငါတို့ကျောပိုးအိတ်တွေထဲက ကျောင်းယူနီဖောင်းတွေနဲ့ ပြန်လဲလိုက် ရင် ရတာပဲဟာ”
ထူးကျော်၏စကားကို သူ့စိတ်ထဲမှနေ တိတ်တဆိတ် ထောက်ခံမိလိုက်၏။ ဟုတ်သည်လေ။ သူတို့ကျောပိုးအိတ် တွေထဲမှာ အပေါ်ဖြူ၊ အောက်အပြာ ကျောင်းယူနီဖောင်းတွေ ရှိနေခဲ့တာပဲ။ ဒဂုံစင်တာမှ ရုပ်ရှင်ရုံရဲ့အိမ်သာထဲမှာ အိမ်ကယူလာတဲ့ အပြင်အ၀တ်အစားတွေနဲ့လဲဝတ်ကြပြီး GTC ကျောင်းသားတွေမှန်းမသိအောင် အပြင်မှာ လျှောက်လည်ခဲ့ကြပေမယ့် အိမ်ပြန်ရင် ဒီအ၀တ်အစားတွေနဲ့မှ ပြန်လို့မရတဲ့ဟာ။ ထူးကျော်ပြောသလို တက္ကစီထဲ မှာ ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြန်လဲဝတ်ရမှာပါပဲ။ နောက်တစ်ခါ ပြန်တွေ့ဖို့မလွယ်လှသော၊ ပြန်တွေ့ရင်လည်း ဂရုစိုက်စရာ မလိုသော တက္ကစီဒရိုင်ဘာအား သူတို့အနေဖြင့် ဘာမှ ရွံ့ကြောက်နေစရာ အကြောင်းမရှိ။
သုံးယောက်သား ထီးတစ်ချောင်းအရိပ်ကိုခိုရင်း ပလက်ဖောင်းအစပ်တွင် ရပ်လိုက်မိကြ၏။ သူတို့ကျောဘက်မှ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာတော့ မိုးသည်းသည်း ညနေခင်းထဲတွင် လူတွေက ရှုပ်ထွေးနေကြဆဲ။ အချိန်တန် အိမ်ပြန်မရောက်မှာ စိုးရိမ်နေပုံရသော ထူးကျော်က အလယ်မှနေပြီး လာသမျှ တက္ကစီများအား လက်လှမ်းတား နေလေ၏။ သို့သော် အချို့တက္ကစီများက ရပ်မပေးကြပဲ ဆက်မောင်းသွားကြ၏။ ခရီးသည်ပါနေလို့လား ဘာလား တော့ သူမသိ။ မိုးရေစက်များကြောင့် ကားအတွင်းပိုင်းတွေကို သူတို့ကောင်းစွာ မမြင်နိုင်သောကြောင့်ပင်။
ဒါကို ထူးကျော်က အားမလျှော့၊ ဆက်တား၏။ ထိုစဉ် လွယ်ထားသော သူ့ကျောပိုးအိတ်ကြိုးက ပခုံးပေါ်မှ လျှောကျချင်လာတာမို့ တစ်ဖက်လှည့်ကာ ပြန်တင်မိနေဆဲ...
“ဟော... ကားရပြီ။ လာကြ ဟေ့ကောင်တွေ”
ထူးကျော်က မိုးသံလေသံကိုကျော်အောင် ၀မ်းသာအားရပြောရင်း သူတို့အနားမှာ ရပ်လာသော တက္ကစီ တစ်စီး နားသို့ တိုးသွားလေ၏။ အိတ်ကို သေချာပြင်လွယ်ရင်း မိုးစက်များလွတ်အောင် ထီးအောက်လိုက်ခိုကာ အနားမှ တက္ကစီကို ကြည့်မိလိုက်တော့ သူ့ရင်ထဲ ထိတ်ခ,နဲ ဖြစ်သွားရ၏။ ထိုစဉ်...ဒရိုင်ဘာဘေးမှ ပိတ်ထားသော ကားပြတင်းမှန်လေးက လျှောကျလာခဲ့သည်။
ကားမှန်ချပ်၏အနောက်မှ အနှေးပြကွက်တစ်ခုလို ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာသော မျက်နှာတစ်ခုအား သူမြင် လိုက်ရချိန်တွင်တော့ စောစောက ထိတ်ခ,နဲခုန်မိသော သူ့ရင်သည် ဒိုင်းခ,နဲ ပွင့်ထွက်သွားရသလိုပင်။
သို့သော် ထိုအသံသည် သူ့နှုတ်မှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်။ ရင်တွင်းမှာသာ ကြောက်လန့်တကြားဖြင့် ရေရွတ် မြည်တမ်းလိုက်မိခြင်းသာ။
ဖေကြီးက ကားထဲမှနေပြီး သူ့အား ခပ်စူးစူးတစ်ချက်လှမ်းကြည့်၏။ နောက်... ထူးကျော်ဘက်လှည့်ကာ...
“ကျွန်တော်က ကျောက်မြောင်း သီတာမှတ်တိုင်မှာဆင်းမယ်။ ပြီးရင် သူက တာမွေ ဦးချစ်မောင်လမ်းမပေါ် မှာ ဆင်းမယ်။ သူကတော့ တောင်ဥက္ကလာက ဝေဇယန္တာလမ်းဘက်”
“ဒါဆို အန်ကယ်လ့်ကို သုံးထောင့်ငါးရာပဲပေးပါ”
“မရလို့ပါကွယ်။ အန်ကယ်လ်တောင်းတာ ဈေးအမှန်ပါပဲ”
ထူးကျော်နှင့် အချီအချပြောနေရင်း ဖေကြီးက ခပ်စိမ်းစိမ်းမျက်ဝန်းများဖြင့် မျက်မှန်အောက်မှနေပြီး သူ့ကို ဝေ့ခနဲ တစ်ချက်ကြည့်ပြန်၏။ ဒီအကြည့်မျိုးကို သူကောင်းကောင်းသိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ သူ့ကို ဒေါသထွက်လွန်း လျှင်ဖေကြီးက ထိုကဲ့သို့ ကြည့်တတ်ခြင်းကြောင့်ပင်။ ဖေကြီးအကြည့်က လျှပ်တစ်ပြတ်လေးသာမို့ သူ့သူငယ်ချင်း တွေ ရိပ်မိနိုင်စရာ အကြောင်းတော့မရှိ။ သို့သော် သူ့ကျောရိုးတစ်လျှောက်မှာတော့ စိမ့်ခ,နဲ ဖြစ်သွားရလေ၏။
“ကဲ...သွားမယ်ကွာ။ ငါးရာနဲ့ ဆစ်မနေပါနဲ့တော့၊ ငါတို့အားလုံးက ရုပ်ရှိ ရေလျှံတွေပဲဟာ။ မင်းဈေးဆစ်နေတာနဲ့ ဒီမှာ စိုရွဲကုန်ပြီ”
ပြည့်စုံက ထူးကျော်အား ရယ်သံတစ်ဝက်ဖြင့် ပြောရင်း ပလက်ဖောင်းနှင့်ကပ်လျှက် နောက်ခန်းကားတံခါးကို ဆွဲ ဖွင့်ကာ ကားပေါ်သို့အရင်ဆုံးတက်လေ၏။ နောက်... ပြည့်စုံဘေးတွင် သူဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ ထူးကျော် က နောက်ဆုံးမှ ထီးကိုပိတ်ကာ သူ့ဘေးမှာ ၀င်ထိုင်လာသည်။ ထူးကျော်ဘက်မှ ကားတံခါးပိတ်လိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဖေကြီးမောင်းသော တက္ကစီကားလေး၏ဘီးများက လမ်းမပေါ်တွင် စတင်ရွေ့လျားလေတော့သည်။
ကားဘီးများ စ,တင်ရွေ့လျားတာနှင့် ထူးကျော်တို့က အင်္ကျီလဲဖို့ပြင်ကြ၏။ သူကတော့ မလှုပ်မိ။ ဟုတ်သည်လေ၊ တစ်နေ့လုံး သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ကျောင်းပြေးကာ လျှောက်လည်၊ သောက်စားပြီးကာမှ အိမ်ပြန်ဖို့အတွက် ဖေကြီးမောင်းသော တက္ကစီကားကို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ငှားစီးမိလျှက်သား ဖြစ်သွားရပြီးတဲ့နောက်မှာ အ၀တ်လဲနေလို့ရော သူ့အတွက် ဘာထူးလာတော့မှာလဲ။
ကျောင်းယူနီဖောင်းကို ကြယ်သီးတပ်ရင်း ထူးကျော်က ပခုံးချင်းတိုက်ကာ သူ့ကိုမေးလာ၏။ သူခေါင်းခါရင်း ကားမောင်းနေသော ဖေကြီးအား တစ်ချက်ခိုးကြည့်လိုက်မိသည်။ ထိုအခါ ကားထဲမှ နောက်ကြည့်မှန်လေးထဲမှာ ဖေကြီးနှင့်သူ အကြည့်ချင်း သွားဆုံကြ၏။ စူးရှရှမျက်ဝန်းများဖြင့် ကြည့်လိုက်သော ဖေကြီးအကြည့်ကို သူရင်မ ဆိုင်ရဲတာမို့ ခေါင်းငုံ့လိုက်မိပါသည်။ သို့သော် တော်သေးသည်ဟု ဆိုရမည်။ သူငယ်ချင်းများရှေ့မှာ သူ့အား သိ က္ခာကျအောင် ခုထိ ဖေကြီးက ဘာဆိုဘာမှ မပြောသေး၊ မလုပ်သေးပါ။ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ဖေကြီးလုပ်နေပုံက သူ့နှင့် သူစိမ်းတွေလိုမျိုး။ သူကလည်း ခုထိ ဖေကြီးကို မခေါ်ရဲသေး။
“ဒီကောင်က အိမ်ပိုင်ပါတယ် ထူးကျော်ရာ၊ မင်းလိုမဟုတ်ဘူး”
ပြည့်စုံ၏အသံက မသိသားဆိုးဝါးစွာ ထွက်လာပြန်၏။ မှန်အလုံပိတ်ကားအတွင်းမှာ အဲကွန်းဖွင့်ထားသော် လည်း သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ပူလောင်လာသလို ဖြစ်လာပြီး ထိုင်နေရာမှပင် အငွေ့ပျံထွက် ပျောက်ကွယ် သွားချင်မိ လာရ သည်။ ဒီကောင်တွေ ဘာမှမသိပဲ စွတ်ပြောနေကြသော စကားလုံးများကြောင့် ကြာရင်ခက်တော့မည်။ သို့သော် သူမတားဆီးနိုင်ခဲ့။ ဟုတ်သည်၊ သူတို့သူငယ်ချင်းသုံးယောက်က တက္ကသိုလ်ရောက်မှ ခင်ကြသူများမို့ တစ် ယောက်အိမ်လည်း တစ်ယောက် မရောက်ဖူး၊ သူ့အဖေဘာလုပ်တယ်၊ ကိုယ့်အဖေဘာလုပ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း ဆွေးဆွေးနွေးနွေး မပြောဖူးခဲ့ကြ။ နေတာလည်း တစ်နေရာစီမို့ ကျောင်းမှာသာ တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြတာ။ တွေ့တာနှင့် စာ အကြောင်းပြောဖို့၊ နောက်ဖို့ ပြောင်ဖို့၊ စိတ်ဝင်စားနေကြသော ကောင်မလေးတွေအကြောင်း ပြောကြဖို့၊ ကျောင်း မှာ ဆရာတွေမသိအောင် ဖဲခိုးရိုက်ကြဖို့၊ ကျောင်းတက်ရတာညစ်လာလျှင် ခုလိုမျိုး တစ်ခါတစ်လေ ကျောင်းပြေး ဖို့၊ ဘီယာသောက်ဖို့လောက်ပဲ အာရုံထားခဲ့ကြတာ။ ထို့အတွက် အခု ကားမောင်နေသော တက္ကစီဒရိုင်ဘာကြီးက သူ့အဖေဖြစ်နေမှန်းမသိလို့ ဒီကောင်တွေ လျှောက်ပြောနေကြတာ သူတို့အပြစ်မှ မဟုတ်ခဲ့တာပဲ။
ဒါဆို သူကရော ခုထိ သူငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာ ဖေကြီးကို ဘာဖြစ်လို့ မခေါ်ဖြစ်သေးတာပါလိမ့်။ ဖေကြီးက တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာတစ်ယောက်မို့ သူငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာ ခေါ်ဖို့ ရှက်နေမိလို့လား။ ဟင့်အင်း.. အဲ့ဒီလိုတော့ မဟုတ်ရ၊ လုံးဝ မဟုတ်ရပါ။ သူငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာ သူ့အား ဖေကြီး တစ်ခုခုလုပ်လိုက်မှာကို ရှက်ကြောက်စိုးရွံ့နေမိခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ကားလေးကတော့ လမ်းမပေါ်တွင် တရိပ်ရိပ် ပြေးလွှားနေဆဲ။ ထို့အတူ သူ့စိတ်တို့ကလည်း စုစည်းလို့ မရနိုင် လောက်အောင် ဟိုဟို ဒီဒီ လွင့်ပျံ့ကာ ပူလောင်ကျွမ်းလျှက် ရှိနေခဲ့ရ၏။ အိမ်ပြန်ရောက်လျှင် ဖေကြီးကို သူ ဘယ်လို အကြောင်းပြလို့ ရနိုင်မလဲ၊ ရှင်းပြလို့ ရနိုင်မလဲ။
“ဟေ့ကောင် ၀ဏ္ဏ၊ တိတ်လှချေလားကွ။ မင်း တော်တော်မူးနေပြီနဲ့တူတယ်”
ပြည့်စုံအသံက အာလေးလျှာလေးဖြင့် အကျယ်ကြီး ထွက်လာပြန်သည်။ ခေါင်းပေါ်မှ ဆံပင်တွေ ထောင်သွား မတတ် စိုးရွံ့သွားမိသော်လည်း ဘာမှမဖြစ်ဟန်ဆောင်ကာ ပြည့်စုံအား ခေါင်းခါပြလိုက်မိ၏။ တစ်ဆက် တည်းလိုလို ကားမောင်းနေသော ဖေကြီးအား စိတ်မလုံစွာဖြင့် မသိမသာလှမ်းကြည့်မိတော့ ကားတွင်းရှိ နောက် ကြည့်မှန်လေးထဲမှာ ဖေကြီးနှင့်သူတို့ အကြည့်ချင်း ဆုံမိသွားကြပြန်သည်။ မျက်မှန်အောက်မှ ဖေကြီး၏မျက်ဝန်း များက စိမ်းဖန့်ဖန့်အရောင်တွေ ဖျာထွက်နေသည်ဟုပင် သူ့စိတ်ထဲ တွေးထင်လိုက်မိ၏။ သူ အာခေါင်တွေခြောက် ကာ ခေါင်းထဲမှ ရီဝေေ၀ခံစားချက်များပင် ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ဖြစ်ချင်သွားရပြန်သည်။ ရင်ထဲမှာလည်း စိုး ရွံ့စိတ်၏လှုံ့ ဆော်မှုဖြင့် တထိတ်ထိတ် အခုန်မြန်လာ၏။ ဘာမှမသိပဲ ပြည့်စုံတို့ လျှောက်ပြောနေတာနှင့် ကြာရင် ခက်ရတော့မည်။ ထို့ကြောင့် ကားပေါ်မှ ဒီကောင်တွေ မြန်မြန်ဆင်းသွားကြပါစေတော့ဟုသာ စိတ်ထဲမှနေ ကြိတ် ကာ ဆုတောင်းနေမိလိုက်သည်။
သူတို့ခရီးစဉ်အတိုင်း ကျောက်မြောင်း သီတာမှတ်တိုင်အနီးရောက်တော့ ထူးကျော်က အရင်ဆင်းသွား၏။ နောက်... တာမွေမှ ဦးချစ်မောင်လမ်းမတစ်နေရာအရောက်တွင် ပြည့်စုံက သူ့အားနှုတ်ဆက်လျှက် ဆင်းသွားပြန် လေသည်။ ပြည့်စုံ ဆင်းသွားပြီးပြီးချင်း ကားထဲတွင် ဖေကြီး၏ တောက်ခေါက်လိုက်သံက နင့်နင့်သည်းသည်းနိုင် လွန်းလှစွာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့၏။ တစ်ကိုယ်လုံးကိုကျုံ့ကာ ယောင်ယမ်းပြီး သူအသက်အောင့်ထားလိုက်မိစဉ် ကား လေးက စောစောကထက်ပိုပြီး အရှိန်ပြင်းစွာ မောင်းထွက်လိုက်ခြင်းအား ခံစားမိလိုက်သည်။ ခုမှ ကူရာ ကယ်ရာ မဲ့သလိုမျိုးလည်း ဖြစ်လာရ၏။ ကားအပြင်ဘက်တွင်တော့ မိုးစက်များက သည်းထန်စွာဖြင့် ရွာသွန်းကျနေဆဲ။
ဖွင့်ဟထားသော ပြတင်းပေါက်ဆီမှ တိုးဝင်လာသော မိုးသက်လေက သူ့အား မအေးမြစေနိုင်ခဲ့ပါ။ သူ့ရင်ထဲတွင် မခံချင်စိတ်၊ နာကျင်စိတ်၊ ဒေါသဖြစ်စိတ်တို့ဖြင့် ပူလောင်လွန်းနေခဲ့ရ၏။ အိမ်အပြင်ဘက်ဆီမှ ရွာသွန်းနေ ဆဲဖြစ်သော မိုးရေစက်များ၏ ခပ်ကြမ်းကြမ်း မြည်တမ်းသံတို့က ထိုခံစားမှုအား ပိုမိုအားကောင်းအောင် လှုံ့ဆော် ပေးနေခဲ့ကြသလိုလို။
“မင်းဟာ.. လူဖြစ်မယ့်ကောင်မဟုတ်ဘူး။ အသက်နှစ်ဆယ်မပြည့်သေးဘူး၊ ကျောင်းခန်းထဲမှာ ရှိနေရမယ့် အချိန်မှာ လမ်းပေါ်ရောက်နေပြီး ဘီယာလေးတမြမြနဲ့။ ဘာလဲ၊ မင်းက မင်းကိုယ်မင်း သိပ်ဟုတ်နေပြီလို့ ထင်နေ တာလား။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ဆောရီးပဲ ၀ဏ္ဏ။ ငါအဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်မျိုးကို သားမတော်ချင်ဘူး။ သိပ်ရှက်ဖို့ ကောင်း လွန်းလို့ပဲ။ အဲ့ဒီတော့ ဒီလိုပုံမျိုး မင်းဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် အဆိပ်ပင်ကိုတော့ ငါရေမလောင်းနိုင်ဘူး။ ကဲ... မင်း ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ။ မင်းလမ်းကို မင်းဘာသာမင်း သေချာရွေးတော့ ၀ဏ္ဏ”
ဖေကြီးကတော့ တစ်လမ်းလုံး ထိန်းချုပ်ထားရသမျှတို့အား သူ့အပေါ် စိတ်ရှိသမျှပေါက်ကွဲပြီးနောက် ညမမှောင်မီ ကားပြန်အပ်ဖို့ရာ အုံနာအိမ်ရှိရာဆီသို့ ပြန်ထွက်သွားခဲ့ပြီ။ သို့သော် ဖေကြီးပြောသွားခဲ့သော ဒေါသရောင် လွှမ်းသည့် စကားသံများက ခုထိ သူ့နားထဲမှ ထွက်မသွားကြသေး။ ညနေတုန်းက သားအဖနှစ်ယောက် အိမ်ပြန် ရောက်ရောက်ချင်း သူ့အား ဖေကြီးထိုးခဲ့သော လက်သီးချက်များထက် ထိုစကားများက သူ့ရင်ကို ပိုမိုနာကျင်စေ နိုင်လွန်းလှပါသည်။
တကယ်ဆို သူ့ကို ဖေကြီး ဒီလိုမပြောသင့်ပါ။ သူကျောင်းပြေးခြင်း၊ ဘီယာသောက်ခြင်းတို့က တစ်ခါတစ် လေမှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားသဘာဝ ပျော်ရွှင်ပေါ့ပါးစွာ နေတတ်ခဲ့သော်လည်း ကျောင်းမှ ရွယ်တူသူငယ် ချင်းတချို့လို မူးယစ်ဆေးဝါး ဘာညာ၊ သူမသုံးဖြစ်။ ကျောင်းသူလှလှလေးများနှင့်လည်း ပွေပွေရှုပ်ရှုပ် မနေမိ။ ဆ ရာများမသိအောင် တစ်ခါတစ်ရံ ဖဲခိုးရိုက်တတ်သော်လည်း အပျော်သဘောမှလွဲပြီး လောင်းကစားအား ခုံမင်နှစ် သက်ခြင်းတို့ မဖြစ်မိတာက အမှန်။ ထို့ပြင် ဒီနှစ်က ဒုတိယနှစ်မို့ B. Tech ၀င်နိုင်ဖို့ သူကြိတ်ကြိုးစားနေခဲ့မိသေး တာ။ သားအဖနှစ်ယောက်တည်းသာရှိသော သူနှင့်ဖေကြီးတို့ဘ၀အတွက် သူဘက်ကလည်းတတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားနေမိခဲ့လေတာ။
ဒါတွေကို ဖေကြီးက မသိပဲနှင့် သူ့အား စွပ်စွဲပြောရက်သည်။ ‘လူဖြစ်မယ့်ကောင် မဟုတ်ဘူး’၊ ‘အဆိပ်ပင် ရေမလောင်းနိုင်ဘူး’ဆိုသော စကားတွေကို သူမခံချင်မိ။ သူ့မာနတို့အား နှိုးဆွနေခဲ့သလို ခံစားရမိ၏။ သူ့အား ဖေ ကြီး အထင်သေး၊ ရှုပ်ချလွန်းသည်ဟူသော အတွေးတို့က သွေးကြောတစ်လျှောက် မွှေနှောက်စီးဆင်းနေခဲ့ကြ သည် ထင်ရ၏။
ရေမြှုပ်မွေ့ယာ ခပ်ထူထူခင်းထားသော ကုတင်ပေါ်တွင် ထိုင်နေရာမှ သူအောက်သို့ ဆင်းလိုက်၏။ ထိုအခါ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ နံရံထက်တွင် ချိတ်ဆွဲထားသော ကိုယ်တစ်ပိုင်းပေါ်မှန်ထဲမှ သူ့မျက်နှာအား မျက်နှာကျက်ဆီမှ ဖျာကျနေခဲ့သည့် မီးချောင်းအလင်းရောင်အောက်တွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေ့လိုက်ရ၏။ သြော် ဖေကြီးရဲ့ ဒေါသ လက်သီးတွေထဲမှတစ်လုံးက သူ့ဘယ်ဘက်မေးရိုးတစ်ဝိုက်ကို အနည်းငယ်ညိုမည်း၊ ယောင်ကိုင်းနေစေခဲ့ပါလား။
သူ မဲ့ပြုံးတစ်ချက်ကို ပြုံးလိုက်မိသည်။ ဘယ်ဘက်မေးရိုးနေရာက အောင့်ခ,နဲခံစားရ၏။ အဓိပ္ပါယ်မဲ့စွာခေါင်းခါရင်း သူထပ်ပြုံးမိလိုက်ပြန်သည်။ နောက်... သူ့ဗီရိုလေးထဲမှ ခရီးဆောင်ကျောပိုးအိတ်နှင့် အ၀တ်အစားတချို့ကို ထုတ်ယူကာ ကုတင်ပေါ်သို့ ပစ်တင်လိုက်၏။ ထိုစဉ် လက်မှာပတ်ထားသော Casio တံဆိပ် ဓာတ်ခဲနာရီ အမည်းရောင်လေးက တစ်နာရီ တစ်ခါမြည်သည့် အလေ့အထအတိုင်း တီ,ခနဲ တစ်ချက်ထ,မြည်လာသည်။ နာရီ ကိုကြည့်လိုက်မိတော့ ညခုနစ်နာရီ။
အ၀တ်များကို ကျောပိုးအိတ်ထဲသို့ ခပ်သွက်သွက်လေး သူထည့်လိုက်၏။ ခုနေ မြန်မြန်လုပ်ရမည်။ မလုပ်လို့မဖြစ်၊ ညခုနစ်နာရီဆိုတာ ခါတိုင်း ဖေကြီးကားအပ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်နေကျအချိန်။ ထို့ကြောင့် အခုလောလော ဆယ် ဖေကြီးပြန်မလာသေးခင် ဒီအိမ်ပေါ်ကနေ သူအမြန်ဆုံး ဆင်းရမည်။ ‘လူဖြစ်မယ့်ကောင် မဟုတ်ဘူး’ဆို သော ဖေကြီး၏ စကားမှားကြောင်း ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြင့် သူသက်သေပြချင်မိနေ၏။
ဒီညတော့ ပြည့်စုံအိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ထူးကျော်အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ် သူအိပ်မည်။ နောက်ရက်များတွင် သူအလုပ်ရှာပြီး ရရာအလုပ် ၀င်လုပ်မည်။ နောက်... ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အဆောင်ငှားနေပြီးနေမည်။ ကျောင်းတော့ ခဏနား ထားရမည် ထင်၏။ သို့သော် ကိစ္စမရှိ၊ အပြင်မှာ အလုပ်လုပ်ကာ ပိုက်ဆံစုမိပြီးနောက် သူကျောင်းပြန်တက်မည်။ လူတစ်လုံး သူတစ်လုံးဖြစ်ကာ ဘွဲ့ရပြီးတော့မှ ခေါင်းမော့ ရင်ကော့ပြီး ဖေကြီးဆီသို့ သူပြန်လာမည်။
စိတ်ကူးထဲမှ အစီအစဉ်အား ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကျေနပ်သွားရ၏။ မှတ်ပုံတင်၊ ကျောင်းသားကဒ်၊ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာလေးနှင့် ပိုက်ဆံအိတ်တို့ကို ယူလိုက်သည်။ မမေ့မလျှော့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက် မိတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာ နည်းနည်းအားလျှော့သွားမိ၏။ အိတ်ထဲမှာ သူပိုင်သောပိုက်ဆံက ငါးထောင်ပင် မပြည့်ချင် တော့။ ပြီးတော့ ခုထိ ညစာလည်း မစားရသေး။
အိပ်ယာပေါ်တွင် ပြန်ထိုင်ချလိုက်ပြီး သူခဏ ငိုင်သွားမိသည်။ နောက်... ခေါင်းထဲသို့ အကြံတစ်ခု ဖျတ်ခနဲ ၀င်လာမိတော့ အိပ်ယာထက်မှနေ ချက်ချင်းပြန်ထ,လိုက်၏။ ဟုတ်သည်၊ ဖေကြီးအခန်းထဲမှ ဗီရိုထဲမှာ ပိုက်ဆံတ ချို့ သိမ်းထားနိုင်သည်။ ထိုအထဲမှ သုံးဖို့စွဲဖို့ နည်းနည်းယူသွားရမည်။ တစ်ခါမှတော့ ဖေကြီးမသိအောင် သူမယူခဲ့ ဖူး။ သို့သော် ဒီတစ်ခါယူခြင်းက ဖေကြီးထံမှနေ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ယူခြင်းမို့ သူ့လုပ်ရပ်က မှန်သည်ဟု ကိုယ့်ဖာ့ သာပြန်ပြီး အားပေးမိသည်။
ကျောပိုးအိတ်ကိုလွယ်ကာ သူ့အခန်း၏ခေါင်းရင်းဘက်ရှိ ဖေကြီးအိပ်ခန်းဘက်သို့ ထွက်ခဲ့လိုက်သည်။ တံခါးမရှိသော ၀င်ပေါက်နားမှ လိုက်ကာလေးကိုမ,ကာ မီးခလုတ်လေးကိုစမ်းပြီး ဖွင့်လိုက်မိ၏။ လင်းသွားသော နှစ် ပေ မီးချောင်းရောင်အောက်တွင် ဖေကြီး၏ ရှစ်ပေပတ်လည်လောက်သာကျယ်ဝန်းသော အိပ်အခန်းလေးက ငြိမ် သက်စွာ တိတ်ဆိတ်လျှက်။
အခန်းလေးထဲသို့ သူလှမ်းဝင်လိုက်၏။ ဆုံးဖြတ်ပြီးသားအတိုင်း အခန်းထောင့်မှ စေ့ရုံသာစေ့ထားသော ဖေကြီး၏ ဗီရိုလေးကို သူဖွင့်လိုက်သည်။ ပထမအထပ်မှ အနည်းငယ်သာရှိသော ရှပ်အင်္ကျီအထပ်များ၊ ပုဆိုးအထပ် များ၏ကြားတွင် သိမ်းထားနိုင်သော ပိုက်ဆံတချို့ ရှိနိုးနိုးဖြင့် သူရှာမိသော်လည်း မတွေ့ရ။ ထို့ကြောင့် ဒုတိယ ထပ်တွင်ရှိသော စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဖိုင်များကြားတွင် ရှာမိပြန်သည်။ ပိုက်ဆံနှင့်တူတာ အစ၊ အနမျှပင် မတွေ့ရ ပြန်။
သူစိတ်မလျှော့ပဲ အောက်ဆုံးထပ်ဖြစ်သော တတိယမြောက်အထပ်ဆီသို့ မျက်စိရောက်သွားမိ၏။ သို့သော် ထိုအထပ်တွင် ခပ်လတ်လတ်အရွယ်အစားရှိသော ကပ်ထူစက္ကူတစ်ဘူးနှင့် စာအုပ်ဟောင်းတချို့တို့မှလွဲပြီး ကျန် တာ ဘာမှမရှိ။ အိတ်ကိုဘေးချကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ထိုင်ချလိုက်ပြီး စက္ကူဘူးကို သူအပြင်ထုတ်လိုက်သည်။ နောက်... ဖွင့်ကြည့်မိတော့ ထိုအထဲတွင် ဘာမှ ထွေထွေထူးထူးမရှိ။ နာရီအဟောင်းများ၊ တိုလီမိုလီများ၊ စာအုပ် ဟောင်းများနှင့်အတူ ပလတ်စတစ်အိတ်ဖြင့် ပတ်ထားသော အထုတ်လေးတစ်ထုပ်ကိုသာ တွေ့ရသည်။
ပလတ်စတစ်အိတ်ကို အလောတကြီးနိုင်စွာ သူဖွင့်ကြည့်လိုက်မိ၏။ တွေ့လိုက်ရတာက သတင်းစာစက္ကူဖြင့် အဖုံးဖုံးထားသော ဗလာစာအုပ်တစ်အုပ်နှင့် အဖြူအစိမ်း ကျောင်းဝတ်စုံ သေးသေးလေးတစ်စုံ။ ဗလာစာအုပ် လေး၏ အဖုံးပေါ်မှ မညီမညာရေးထားသော ကလေးလက်ရေးလေးများက သူ့ရင်ကို လှပ်ခနဲ ဖြစ်စေသည်။
အ.မ. က (၇)ကျောင်း။
ကြည့်စမ်း၊ ဒါ... သူ သူငယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀က ရေးခဲ့ဖူးသော စာအုပ်လေးပါလား။ ဘာရယ်မှန်းမသိသော ခံစားမှုတစ်ခု၏ လှုပ်နှိုးမှုဖြင့် သူ့ရင်တွေ အခုန်မြန်လာရသည်။ စာအုပ်လေးကို လှန်ကြည့်မိတော့ အထဲမှ လေးကြောင်းမျဉ်း စာမျက်နှာများပေါ်တွင် ငယ်စဉ်က သူကြိုးစားပမ်းစား ရေးထားခဲ့မိသော ၀လုံးလေးများ။ တချို့ က ညီညီညာညာ၊ တချို့က မညီမညာဖြင့်။ စာအုပ်လေးဆုံးအောင် သူလှန်ကြည့်မိတော့ စာအုပ်နောက်ဆုံးမှ လွတ်နေသော စာရွက်ပေါ်တွင် သူငယ်တန်းကျောင်းဝတ်စုံလေးဖြင့် ရိုက်ထားသော သူ့ဓာတ်ပုံလေးကို ကပ်ထား တာ တွေ့လိုက်ရ၏။ ဓာတ်ပုံလေးမှာ အတော်ပင် ဆေးရောင်မှိန်နေခဲ့လေပြီ။ ဓာတ်ပုံလေး၏အောက်မှာတော့ ဖေ ကြီး၏ လက်ရေး သော့သော့လေးများ။
“သားလေး သူငယ်တန်းစတက်တဲ့နေ့အမှတ်တရပုံ၊ ပထမဦးဆုံး ကျောင်းသင်ခန်းစာ စာအုပ်နဲ့ ပထမဦး ဆုံးဝတ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းဝတ်စုံလေး။ သားလေး ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ဖို့ ဖေကြီး အမြဲတမ်း ကြိုးစားသွားမယ်”
ကြည့်စမ်း..၊ ဖေကြီးဟာ သူငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းသုံးပစ္စည်းလေးများအား ခုချိန်ထိအောင် တယုတယနဲ့ သေချာသိမ်းဆည်းထားဆဲပါလား။ စကားများများမပြောပဲ အမြဲလိုလို သူ့အား မျက်နှာထားတည်တည်ဖြင့်သာ မျက်မှန်ပေါ်ကနေကျော်ပြီး ကြည့်တတ်သော ဖေကြီးရဲ့ရင်ထဲမှာ သူ့အတွက် ချစ်ခြင်းတရား၊ မျှော်လင့်ချက်တို့နှင့် လေးနက်မှုတို့က အပြည့်အသိပ်ပါလား။
ညနေတုန်းက သူ့အား ဖေကြီးလက်သီးဖြင့်ထိုးစဉ် မျက်ရည်တစ်စက်မှ မကျမိခဲ့သော်လည်း အခုတော့ သူ့စိတ်ထဲ မှာ ငိုချင်စိတ်တို့ ပြင်းရှလာခဲ့မိ၏။ ချက်ချင်းဆိုသလို မျက်ရည်တို့ဝဲတက်လာမိသည်။ စာအုပ်လေးကို ပေါင်ပေါ် တင်ထားလိုက်ကာ ငယ်စဉ်က ၀တ်ခဲ့ဖူးသော ကျောင်းဝတ်စုံအဟောင်းလေးအား လက်ဖြင့် အသာအယာ တို့ ထိလိုက်စဉ် သူ့ပါးနှစ်ဖက်ပေါ်သို့ မျက်ရည်စက်တို့ လိမ့်ဆင်းလာခဲ့လေတော့၏။
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး သူ့အား တစ်ခါမှမရိုက်ဖူးခဲ့သော၊ သူ့ကို နာကျင်စရာစကားတွေ မပြောခဲ့ဖူးသော ဖေကြီးက ဒီနေ့ကျမှသူ့အား ကိုယ်ထိလက်ရောက် နာကျင်စေခဲ့တာကို အခုမှ နားလည်လာမိတော့သည်။ သူ့အပေါ်မှာ ပညာရေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဖေကြီးက အများကြီးမျှော်လင့်ထားခဲ့သည်ပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ သူကျောင်းပြေးနေ ခြင်းအား ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပက်ပင်းတွေ့လိုက်ရပြီးတဲ့နောက် ဖေကြီး အရမ်းဒေါသထွက်သွားခဲ့တာနေ မှာ။ နေပါဦး၊ သူ့အပေါ် ဒီလောက် အလေးအနက်ထားပြီး မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ ဖေကြီးတစ်ယောက် ဒေါသထွက်တာအ ပြင် ဘယ်လောက်အထိများ နာကျင်၊ ၀မ်းနည်းသွားမှာပါလိမ့်။
တွေးရင်း သူတစ်ချက် ရှိုက်လိုက်မိ၏။ ရင်ထဲမှာလည်း နောင်တရမိလာသည်။ စက္ကူဘူးလေးထဲသို့ ပစ္စည်း များအား ခြေရာလက်ရာမပျက်အောင် ဂရုတစ်စိုက်ပြန်ထည့်ကာ ဘူးလေးအား ဗီရိုထဲသို့ ပြန်ထည့်လိုက်၏။ ပြီး နောက် ဗီရိုအား ကျောမီထိုင်ရင်း မျက်ရည်များကိုသုတ်ကာ ဖေကြီး၏အခန်းလေးအား တစ်ချက်ဝေ့ကြည့်မိသည်။
ဖေကြီး၏ တစ်ယောက်အိပ်ကုတင်လေးပေါ်တွင် မွေ့ယာမရှိ။ သင်ဖျူးဖျာလေးတစ်ချပ်သာ ခင်းထားသည်။ ထိုအပေါ်တွင် ခပ်ညစ်ညစ်အရောင်အဆင်းဖြစ်နေသော ခေါင်းအုံးတစ်လုံးနှင့် ချည်စောင်ဟောင်းလေးတစ်ထည် က ခေါက်လျှက်သား။ အပေါ်လိပ်တင်ထားသည့် တစ်ယောက်အိပ် ခြင်ထောင်အနွမ်းလေးကလည်း ကပိုကရိုဖြင့်။ မြေစိုက် တစ်ထပ်ပျဉ်ထောင်အိမ်လေးမို့ သစ်သားအထပ်ထပ်ဖြင့်ရှိနေသော ဖေကြီးအခန်းနံရံတချို့မှာ ပင့်ကူမျှင် တွေက ဟိုဟို ဒီဒီ ငြိတွယ်လျှက်။
သူပိုပြီး ၀မ်းနည်းသွားမိ၏။ သူ့ကိုမွေးပြီးသုံးနှစ်အကြာတွင် မေကြီးက ဆုံးပါးသွားခဲ့တာမို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဖေကြီးနှင့်အတူတူ တစ်ခန်းထဲအိပ်ခဲ့ရသော်လည်း သူအလယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀ ရောက်ချိန်မှစပြီး ဖေ ကြီးနှင့် အခန်းခွဲအိပ်ခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်မှစ,ပြီးခုထိ ဖေကြီးအခန်းကို သူသေသေချာချာ ၀င်မကြည့်ဖြစ်ခဲ့သလို၊ သိပ်လည်း မ၀င်ဖြစ်ခဲ့တော့။
ခုမှ ဖေကြီးအခန်းကို သူသေသေချာချာ ကြည့်မိ၏။ ကြည့်ရင်းသိလာရသည်မှာ ဖေကြီးအခန်းက သူ့အခန်းနှင့် တော်တော်လေး ကွာခြားနေခဲ့ခြင်းသာပင်။ ဟုတ်သည်၊ သူ့အခန်းက ဖေကြီးအခန်းထက် နည်းနည်းကျယ်၏။ သစ်သားပျဉ်ထောင်အိမ်ဖြစ်သော်လည်း ဖေကြီးက သူ့အခန်းပတ်ပတ်လည်တွင် သုံးထပ်သားများထပ်ကာပြီး နံရံ များကို ညီညီညာညာ၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်စေလျှက် ရေဆေးအပြာနုရောင်လေးတောင် သုတ်ထားပေးသေးသည်။ နောက်ပြီး သူအိပ်ရန်အတွက် ရေမြှုပ်မွေ့ယာအကောင်းစား၊ အ၀တ်ထည့်ရန်အတွက် ကျွန်းဗီရိုတစ်လုံး၊ စာကြည့် ရန်အတွက် စာကြည့်စားပွဲနှင့် ဆိုဖာအပါးစား ဆုံလည်ကုလားထိုင် စသည်တို့သာမက၊ သူပူဆာ၍ လက်ပ်တော့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၊ သီချင်းနားထောင်ရန် မီနီဟုမ်းသီရေတာလေးတစ်စုံတို့ကိုပင် ၀ယ်ပေးထား၏။ ဒါတင်မက သေး ပျဉ်ခင်းကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် မီးခိုးရောင် ဂုန်နီကော်ဇောလေးကို ခင်းထားပေးပြန်သေးသည်။ ထို့ကြောင့် ပြောရ မည်ဆိုလျှင် သူ့အခန်းလေးက တိုက်ခန်းလေးလို ဖြစ်နေခဲ့တာအမှန်။ သို့သော်.. အခု သူမြင်နေရသော ဖေကြီး၏ အခန်းလေးကတော့ဖြင့် မှုန်ကုပ်ကုပ်နိုင်လွန်းလှစွာ၊ အဆင်တန်ဆာမဲ့လွန်းလှစွာ။
ဖေကြီးရယ်၊ ကိုယ်တိုင်က ဖြစ်သလိုနေပြီး သားအတွက်တော့ အစစအရာရာ ပြည့်စုံစေခဲ့သတဲ့လားဗျာ။
မေကြီးမရှိတော့တာ နှစ်တွေကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း နောက်အိမ်ထောင်ထပ်မပြုပဲ သူ့အား တစ်ယောက်တည်း ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့သော ဖေကြီး။ အိမ်ထောင်ကျတာ နောက်ကျခဲ့တာမို့ သူ့အသက်နှစ်ဆယ်အရွယ်မှာ ဖေကြီးက အသက်ခြောက်ဆယ်ဝန်းကျင် ဖြစ်နေခဲ့သော်လည်း၊ အခုထိ သူ့အား အငှားတက္ကစီမောင်းရင်း ရိုးရိုး သားသား ရှာဖွေကျွေးမွေးကာ ပညာသင်ပေးနေဆဲဖြစ်သော ဖေကြီး။ နောက်ပြီး... သူမှတ်မိခဲ့သမျှ ကျောင်းသား ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာ သူ့မျက်နှာမငယ်ရစေအောင်၊ အမြဲ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြစ်နေရလေ အောင် မရှိ ရှိတာရှာကြံပြီး ဖန်တီးပေးခဲ့လေသော ဖေကြီး။ ခုချိန်ထိ ကားမောင်းမထွက်ခင် မနက်အစော ကြီးထ, ပြီး သူ့အား မညည်းမညူ ချက်ပြုတ်ကျွေးနေဆဲဖြစ်သော ဖေကြီး။ ဒီလိုအဖေမျိုးကိုမှ တစ်လွဲမာနဖြင့် စွန့်ခွာထား ရစ်ခဲ့ဖို့ သူကြံစည်မိခဲ့၏။ တွေးရင်း သူ့ရင်ထဲတွင် နောင်တ,တရားတို့ဖြင့် နာကျင်ကာ ဆို့နင့်လှိုက်မောလာရတော့ သည်။
ကျောပိုးအိတ်ကို လက်မှဆွဲကာ သူ့အခန်းသို့ ပြန်ခဲ့လိုက်သည်။ ဗီရိုကိုပြန်ဖွင့်ပြီး ကျောပိုးအိတ်ထဲမှ အ၀တ် အစားများကို ပြန်ထည့်နေစဉ် အိမ်ရှေ့တံခါးဖွင့်သံ ကြားလိုက်ရ၏။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ဆတ်ခနဲ တုန်ခါသွား မိသည်။ ဖေကြီး ပြန်လာပြီ ထင်သည်။ လုပ်လက်စအလုပ်ကို ရပ်ကာ အိပ်ခန်းအပြင်သို့ သူပြေးထွက်ခဲ့လိုက်၏။ ဟုတ်သည်...၊ ဖေကြီးကို သူဝန်ချ တောင်းပန်ချင်လှပြီ။
သူအိမ်ရှေ့ရောက်ခဲ့တော့ အိမ်တံခါးမကြီးအား အတွင်းမှနေ သေချာပြန်စေ့ပိတ်နေသော ဖေကြီး၏ကျောပြင်ကို တွေ့လိုက်ရ၏။ အုံနာအိမ်မှာ ကားထားခဲ့ပြီး ဘတ်စ်ကားစီးကာ မိုးရေထဲမှာ ပြန်လာခဲ့ရတာမို့ ဖေကြီး၏ ပု ဆိုးအောက်နားစတွေက စိုရွှဲနေခဲ့သည်။ ဧည့်ခန်းမှ မီးချောင်းရောင်အောက်တွင် ဖေကြီး၏ဆံပင်တိုတိုလေးများ က ငွေမင်ရောင်တွေ စွန်းထင်းနေခဲ့တာကို ဒီညတော့ သူသေသေချာချာ သတိထားမိလိုက်၏။
ခြေလှမ်း ငါးလှမ်းလောက်အကွာအဝေးတွင်ရှိသော ဖေကြီးဆီသို့ တစ်ဟုန်ထိုးပြေးသွားမိရင်း နောက်ကျော ပြင်ဘက်မှနေ ဖေကြီးအား သူသိုင်းဖက်ပစ်လိုက်မိသည်။ ရုတ်တရက်မို့ ဖေကြီက အံ့သြသင့်ဟန်ဖြင့် ခဏတော့ ငြိမ်နေ၏။ နောက်... ဖက်တွယ်ထားသော သူ့လက်များအား ဒေါသ မပြေသေးသလို အတင်းဆွဲဖယ်လာသည်။ သို့သော် သူလွှတ်မပေး။ ခေါင်းခါငြင်းဆန်ရင်း ပိုပြီး တင်းကျပ်နေအောင် ဖက်တွယ်ထားလိုက်မိ၏။ ကျောပြင်ကို ပါးအပ်ထားမိရင်း ဖေကြီးအား တစ်ခုခုပြောကာ တောင်းပန်ချင်သော်လည်း လည်ချောင်းဝအထိတက်လာသော စကားလုံးများက သူ့နှုတ်ဖျားမှနေ ထွက်ကျမလာနိုင်ခဲ့။ သို့သော် မျက်ရည်တို့က ပါးပြင်ပေါ်သို့ အတားအဆီးမဲ့စွာ စီးကျလာခဲ့ကြ၏။ သူ,မထိန်းလိုက်နိုင်ခင် ရှိုက်သံတို့က ထွက်ပေါ်လာကြပြန်သည်။
သူ့ရှိုက်သံကြောင့်လား မသိ။ ဖေကြီးက သူ့လက်များအား ဆွဲမဖယ်တော့ပဲ ငြိမ်သွား၏။ နောက် သူ့ဘက်သို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်အောင် ဖြည်းညင်းစွာ လှည့်လာပြီး တသိမ့်သိမ့် ငိုနေမိသော သူ့အား နွေးထွေးကြင်နာစွာ ပြန်သိုင်းဖက်လာသည်။ နောက်.. သက်ပြင်းမောတစ်ချက်ကို ကြိတ်ချရင်း သူ့ကျောပြင်အား ခပ်ဖွဖွလေး ပုတ်ပေး နေတော့၏။ ဘာစကားမှတော့ မပြော။
ခုမှ ပိုပြီး သူငိုချင်လာမိသည်။ ထို့ကြောင့် ဖေကြီး၏ ရင်ဘတ်ကို ခေါင်းမှီပြီး သူအားရပါးရ ငိုချလိုက်သည်။ နွေးထွေးသော ရင်ရိပ်အားခိုမိစဉ် ရင်ဘတ်အောက်မှ တဒိတ်ဒိတ်ဖြင့် သွေးတိုးနေသော ဖေကြီး၏ နှလုံးခုန်သံကို သူအတိုင်းသား ကြားနေခဲ့ရပါသည်။ ထိုသံစဉ်ထဲတွင် သူ့အတွက် အမြဲခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ ချစ်ကြင်နာခြင်း စသည်တို့ အပြည့်အ၀ပါနေသည်ဟု ခံစားနားလည်မိသော်လည်း ငိုလို့ကောင်းတုန်းမို့ မှားမိခဲ့သည့် အမှားများအတွက် ဖေ ကြီးကို သူဘာတစ်ခွန်းမှ မတောင်းပန်နိုင်ခဲ့သေး။ ဖေကြီး၏ကတော့ သူ့ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပွေ့ဖက်ထားရင်း နွေးထွေးသော လက်ဖ၀ါးများဖြင့် သူ့ကျောပြင်အား ညင်ညင်သာသာလေး ပွတ်သပ်ပေးနေခဲ့လေ၏။ ။
22nd July, 2013. Monday. 23: 35.
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 2:44 AM
ရင်ထဲမှာ စကားတွေအများကြီး ပြောသွားခဲ့တယ် ကိုဏီ
ဒီဝတ္တုလေးကို Family မဂ္ဂဇင်းကို ပို့ပါ
ဟုတ်တယ် ကိုဏီလင်းညိုရေ.... ငိုမိတယ် မိဘမေတ္တာက ကမ္ဘာတည်တဲ့ တစ်ခုတည်းသောအရာပါ... အမြဲတမ်းအားပေးလျှက် ခင်တဲ့ TYZ
ကျွန်တော်က သူအိမ်ပေါ်က ဆင်းခါနီးမှာ တွေးနေသေးတာ...ဟုတ်တယ် သက်သေပြရမယ်လို့လည်း စိတ်ထဲကနေ ၀ိုင်းကြွေးကြော်ရင်းပေါ့လေ...ကိုယ့်စိတ်ကလည်း ခပ်ရွတ်ရွတ်မဟုတ်လား...
အဆုံးသတ်မှပဲ ငိုင်ကျသွားတော့တယ်...သတိမမူမိတဲ့ လှည့်ကွက်ကလေးနဲ့ အပိုင်ယူသွားတာ ချီးကျူးပါသဗျား...ကျွန်တော် အငိုက်မိသွားတာလည်း ရှက်ရှက်နဲ့ ၀န်ခံရဦးမှာပေါ့...
အခုမှပဲ လင့်ခ်ယူရတာ တောင်းပန်ရဦးမှာပါပဲ...
ကလေးတွေကို ဒီပို့ စ်လေး ဖတ်စေချင်မိတယ်..း)..Bravo !
မလေးတို့ ဓာတ်ပုံတွေနောက်က မလေးဖေဖေ့ရဲ့ လက်ရေးလေးတွေကို အရမ်းသတိရသွားမိပြီး ပိုလို့ မျက်ရည်ဝဲရပါတယ်။
မိဘနဲ့သားသမီးကြားက မေတ္တာကိုခင်းထားတဲ့လူငယ်ပညာပေးဇာတ်လမ်းလေး အတွေးကောင်းပါ၏ ကိုဏီ...
မိဘ ရဲ့ မေတ္တာ စေတနာတွေက
သူတို့ အတွက်ရယ်လို့ မရှိပါဘူး
သား သမီးတွေ အတွက် မိုက်မိုက်ကန်းကန်း
ပေးဆပ်ရဲတာလည်း မိဘ တွေပါပဲ ။
ကိုဏီရေ ထိထိရှရှ ခံစားရတာမို့
မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုခုကို ပို့ပါလို့ မမသူသူလို တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး အဖေ့ကျောပြင်ကို စိတ်ကူးထဲ
ဖက်တွယ်ထားမိတယ် ( တစ်ခါမှ မဖက်ဖူးဘူး )
နဂိုကတည်းက ညီက အဖေချစ်သားဆိုတော့
ဒီပို့စ်က ညီအတွက် ဆိုဖွယ်ရာ မရှိတော့ဘူးပေါ့
ဖခင်တွေရဲ့ စရိုက်ဟာ အပြင်ဘန်းအနေနဲ့ ကြမ်းတမ်းခက်ထန်တယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် သားသမီးအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာဟာနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်။ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ စေတနာမေတ္တာကို ပီပီပြင်ပြင်မီးမောင်းထိုးပြသွားတာပါလား မောင်ဏီရေ။
သိပ်ကောင်းတဲ့ ၀တ္ထုလေး အကို။
အရေးအသားပိုင်း တင်ပြပုံပိုင်း အရမ်းသေသပ်လှပတယ်။
မျက်ရည်တွေဝဲနေခဲ့တာ စာဖတ်ပြီးမှ သိတော့တယ်။ :)